Sumcad Dhawrka Ganacsigaaga iyo Cilaaqaadka dadka (Qaybtii 1aad). W/Q: Axmed Dheere
Tuesday April, 24 2018 - 20:54:31
Wednesday March 22, 2017 - 14:48:31 in by Super Admin
Waxaan halkan idinkula wadaaagi doonaa qormooyin taxane ah oo waxtar iyo faa'iido weyn ka geysan kara koboca ganacsiga.
Cilaaqaadka saxan ama isku xidhka bulshada iyo ganacsigu waa kaalinta ugu miiisaankaa weyn maamulkaa iyo maaaraynnta, balse, ay ganacsatadeenu hilmaansan tahay ama ay shuqul yaraystaan.
Xidhiidhka iyo cillaaqaadku waa hanaan qorshaysan oo lagu duufsado ra’yi caamka bulsho weynta , waxa loo maraa hawraar iyo tallaabooyin saxan.
Waxa sees u ah xog-is-weydaarsi laba daraf dhex mara oo looga dan leeyahay in lagu bedelo dhaqanka iyo falka macaamiisha.
Aan tusaaleyno, arrin in badan
oo inaga mid ah ay taqaano; Koox rag safar ah, oo Burco ka dukaansaday baa intii ay jidka sii socdeen gabayo ku haasaaway. Waxa eelku ka bilowday subag xaydh oo midkood soo gadey balse , lagu dhaliilay.
Subaggu waa iidaan sooreed oo u kala baxa ; Ib iyo qalliin. Kan hore, waxa laga lulaa caanaha laga liso candhada xoolaha, sidaas baa loogu bixiyey ib, oo irridkaa ay ka soo baaxan naasaha xoolaha ah. Qalliinku waa subagga laga saaro so’da xoolaha; laf, baruur, dhuux, badhi, kurus ama xaydh oo iyadu ah ta ugu darajo hoosaysa, balse, subaggu guud ahaan wuu ka darajo sarreeyaa duxda kale ee laga bixiyo dhirta, marka dhaqanka Soomaalida la joogo.
Qisadan ayaa iftiimisay in Xirsi Caamir lagaga horreeyay saamaynta ra’yi caamka, waxaana oosha loo tusay in uu ninkani meel ka dhac u geystay raggii xidid iyo xigaaloba ahaa ee safarka wada ahaa. Isaga oo subag liidta oo xaydh ah nagu sooryeeyay, arrintan oo dhaqanka deelqaaf ku ah. "Haf miyaad la tidhi xaydh, sidaad haan ku dhayanayso”.
Qodobkan marka laga hadlayo xidhiidhka iyo cilaaqaadka, waxa uu raad weyn ku yeeshay Ooshii, waanay u garaabeen Weerar Cali dhaaliishiisa. "Inu subaggii kaa muunad dhacay maqal Islaamkii”.
Tirawgan baa sheegaya in uunkii Alle oo dhammi maqlay xumaanta subagga, -oo muunad dhacu waa marka sumcaddii iyo magacii shay lahaa dhulka gale ee ciid waliba sanka ka qabsato-.
Hawraar ayuu u adeegsaday qancinta bulsho weynta iyo ra’yi caamka, waxaanu ku sifeeyay in subaggii haamaha lagu dhoobi jirey uu xididkii siiyey. J.Marsto, Bare sare oo bixiya cilmiga cilaaqaadka iyo xidhiidhka ayaa ku soo ururiyey afar qodob oo ku dhisan yahay isla xidhiidhku:
2. Tallaabo qaadis
3. Wada xidhiidh
Ganacsigaaga si bay bulshadu u aragtaa, wax bay ka aaminsan tahay, waa in aad baadi-goob samayso si aad u ogaato quluubtooda. Waa in aad inta ku danaysa ka yeelato tallaabooyin qumman, islamarkaana aad la xidhiidho si aad qaabilaad wanaagsan iyo faham saxan u abuurto. Ka dibna dabagal ku samee raadka ay yeelato isla-xidhiidhkiina.
Arritan waxa ay wada shaqayn hufan ka dhex abuurta gudaha iyo dibadda ganacsigaaga, maaha oo keliya in aad magaca ,muunadda iyo sumcaddaada kor u qaaddo, balse, jiritaan fog iyo negaansho ayay u yeeshaa ganacsiga….
W/Q: Axmed Dheere
Maraykanka:-Ninkii looga shakisnaa in uu Maraykanka dadka ku laayay oo la qabtay
24/04/2018 - 10:19:19
Hargeisa:- Kominshanka Doorashooyinka Oo Warqadii Xildhibaan -nimo Gudoonsiiyey Siyaasi Xussen Axmed Ceydiid.
18/04/2018 - 11:06:55
Gudaha:- Rooda Axmed Yasiin Oo Ka Jawaabtey Hadalo Ka Soo Yeedhay Ex Badhasaab Ramaax.
Hargeysa:Daawo Wasiirka Gadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo ka hadlay Waxa uga Qorshaysan Dooxyada Xilliyada Roobabka
16/04/2018 - 18:53:37
Hargeisa:Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa xabad la dhacay dadka shacabka ah ee la jaarka Ah.
16/04/2018 - 18:47:56